सुत्न अघि के गर्ने, के नगर्ने ? - OneZero News
सुत्न अघि के गर्ने, के नगर्ने ?
छिटो सुत्न नजानेः धेरै छिटो सुत्न गयो भने गहिरो निद्रा नपर्न सक्छ । सुत्न जाने उपयुक्त समय भनेको राती १० वजे देखि १०।३० सम्म हो।
निदाउनको लागि मदिरा नपिउनेः रक्सी पिउने गर्दा पनि गहिरो निद्रा नपर्ने र वेला वेलामा निद्रा खुल्ने हुन्छ।